ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ထောင်ချောက် မှအရည်အသွေးမြင့် အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ထောင်ချောက် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကျော်ကြားသောအမည်များတစ်ခုဖြစ်တယ် Taiwan ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူတစ်ဦးပြည့်စုံသည့်အကွာအဝေး အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ထောင်ချောက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၏အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရောင်းချသူထံမှရယူဖို့သောဤအသုံးချဖို့တန်းမြင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျနော်တို့အရွယ်အစားနှင့်ဖောက်သည် '' အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gradations နှင့်အတူထိုထုတ်ကုန်ပေးစွမ်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။
ပုံစံ - CAST STEEL No. D60, D60F
DSC CAST သံမဏိသဏ္AMာန် STEAM ထောင်ချောက်
●MOP 46K 425 x ကို̊ဂ.
●DSC D60 ရေနွေးငွေ့သုံးစွဲမှုကာကွယ်နိုင်ရန်အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံနည်းကျရေနွေးငွေ့ကို insulator တွင်လည်းအသုံးပြုထားသည်။.
●DISC နှင့်ထိုင်ခုံ LIGHT BAND ကို FLATNESS တွေ့ဆုံရန် LAPPED နေကြသည်，လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိုင်ခုံနှင့် disc ကိုတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်နိုင်ပါသည်.
●SCREWED OR အနားကွပ်ဆက်သွယ်မှုရရှိနိုင်ပါသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/thermodynamic-trap.html
အကောင်းဆုံး အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ထောင်ချောက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan